Toerana tena ilaina hitsidihana any Italia | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, Italia
Raha hanao lisitr'ireo tranonkala rehetra ireo izahay Te hahita any Italia izahayManomboka amin'ny toerana voalohany hitsidihantsika hatramin'ny farany, azo antoka fa tsy hisy farany ilay lisitra. Mametra ny tenantsika amin'ny toerana vitsivitsy fotsiny isika, dia afaka manao lisitr'ireo zavatra ilaina rehetra tokony hotsidihin'ny tsirairay any Italia, satria firenena feno tanàna tsara tarehy, zorony tsara tarehy sy nosy nofinofy.
Ity lisitra tsotra ity dia milaza amintsika momba ny toerana manan-danja indrindra fa tsy tokony tsy hahita zavatra manerantany ianao rehefa mitsidika an'i Italia. Ny sasany haharitra kokoa amintsika, fa ny hafa kosa afaka hitantsika izy ireo afaka andro vitsivitsy ary avy eo dia hiroso amin'ny manaraka amin'ny lisitra. Ny ankamaroan'ny mpandeha dia mahazo antoka fa efa nandalo toerana mihoatra ny iray izay arosonay izy ireo.
6 Tany dimy
Amin'ny toerana tena ilaina dia tsy maintsy manomboka amin'ny vatosoa ao amin'ny satroboninahitra isika, izany hoe ny tanànan'i Roma. Toerana tsy maintsy ahitanao farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainanao am-pitoniana, satria manana bebe kokoa noho ny Colosseum. Ilay Plaza de España malaza miaraka amin'ny tohatra misy azy, ny Trevi Fountain, Roman Forum na ny sanganasan'ny Tranombakoka Vatikana. Miatrika tanàna iray manana tantara lava be izahay, izay misy zavatra maro holazaina, noho izany dia tokony hanokana herinandro farafahakeliny hahitantsika izay tena manan-danja indrindra.
Tamin'ny fotoan'ny Karnavaly dia tsy azo atao ny tsy mahatadidy ireo karnavaly malaza sy malaza eran'i Venise. Ny tanànan'ny lakandrano dia manaparitaka ny tantaram-pitiavana sy ny toetra amam-panahy, ary tsy isalasalana fa iray amin'ireo toerana haleha indrindra ho an'ny mpivady. Saingy tsy midika izany fa tsy tokony hitsidika azy irery isika na hiaraka amin'ny namana, satria mihoatra lavitra ny toerana hanaovana fitsangatsanganana gondola am-pitiavana izany. Ny lapan'i Doge sy ny Basilika St. Marka Izy ireo dia sangan'asa kanto tsy azo lavina, ary tsy azontsika atao ny tsy mahita ny fotoana ahafahana mahita ny tetezana Rialto Bridge na ilay tetezana kely an'ny sento
Raha tianao ny zavakanto dia tsy afaka ny tsy hametraka an'i Florence amin'ny iray amin'ireo toerana lehibe ao anaty lisitra ianao, fa ny voalohany. Tanàna italianina feno toerana hitsidika azy. Ny Katedraly Santa María del Fiore no toerana lehibe hankalazana ny dome malaza. Isika koa dia manana ny Uffizzi Galleries miaraka amin'ny sanganasan'ny Renaissance, ny Palazzo Vecchio na ny Ponte Vecchio, izay mbola misy fivarotana mpanao asa tanana ao anatiny. Tena lava ny lisitra, ka tsy maintsy manao drafitra mandritra ny andro maromaro isika.
Ny hatsarana Katedraly Milan Izy io dia iray amin'ireo manintona azy indrindra, tanàna kanto, ary koa ny Galleria Vittorio Emanuele II malaza, toeram-pivarotana fa iray ampiasain'ny ankamaroan'ny mpizahatany maka sary ny saritiny. Afaka mitsidika an'ity tanàna ity haingana ianao, na dia misy zavatra hafa mety hahaliana aza, toy ny Royal Palace na ny Basilica of San Ambrosio.
Ny zavatra tsara momba ny tanànan'i Pisa dia ny ampahany tena mahaliana dia ny misy ny tilikambo malaza, ka raha hitsidika azy isika dia mila tolakandro na maraina fotsiny. Any akaikin'i Florence no misy azy io, noho izany dia drafitra tsara ny dia hitsangatsangana amin'ireo tanàna roa. Manaraka ny Tilikambo mirona amin'i Pisa hitanay ny katedraly. Raha manam-potoana isika dia afaka mitsidika ny Palazzo della Carovana na ny Chiesa de Santa Maria della Spina.
Cinque Terre dia tsy tanàna, fa faritra iray manontolo heverina ho anisan'ny tsara tarehy indrindra eran'i Italia. Izy io dia mandrafitra ny olona ao Vernazza, Corniglia, Monterrosso al Mare, Manarola ary Riomaggiore. Tanàna dimy izay manintona ny saina ho eny amin'ny hantsam-bato izay manatrika ny morontsiraka, izay tratran'ny lalana somary sarotra nefa amin'ny dia tsy azo lavina fa mendrika izany. Ireo trano miloko manandrify ny mangain'ny ranomasina dia nanjary mihoatra ny carte postale tsara tarehy, ary tsy latsa-danja amin'izany ny toerana.
Any amin'ny faritry Tuscany isika dia miatrika tanàna iray izay tsy namoy ny hatsarany tamin'ny fahagolan-tany sy ny fahagola, izay toa nijanona ny fotoana. Ilay goavambe Piazza del Campo Izy io dia iray amin'ireo kianja mahavariana indrindra, izay itazonana ny Palio an'i Siena ihany koa, ilay hazakazaka soavaly tandindona izay nanjary mahasarika ny tanàna. Ny zavatra hafa hitantsika dia ny katedraly na ny Basilika Santo Domingo.
Fantatry ny rehetra ny tantara mahatalanjona an'ny Tanàna Pompeii, nalevina tamin'ny taona 79 taorian'i fipoahan'ny Vesuvius, tsy hita raha tsy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny zavatra tsara indrindra momba ny fandevenana azy dia ny fitahirizana azy amin'ny toerana tena tsara nandritra ny taonjato maro, koa ankehitriny manana porofo ara-tantara lehibe eto amin'ity tanàna ity isika. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fiainana tao an-tanàna ianao taonjato maro lasa izay, dia tsy maintsy mitsidika an'ity tanàna ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Toerana tena ilaina hitsidihana any Italia
Inona no hitsidika an'i Hanoi